ISaga "Intshumayelo Yomlilo", ebhalwe nguFrancesca Haig, ifika ngoSepthemba 15 | Izincwadi Zamanje
ISaga "Intshumayelo Yomlilo", ebhalwe nguFrancesca Haig, lehlela ngoSepthemba 15
Uma ungumthandi wezinganekwane ezimnandi futhi uqobo "ufe" ekufundweni okuluthayo, i-trilogy Intshumayelo yomlilo Uzoyithanda. Yize kuzodingeka ulinde kuze kube uLwesibili oluzayo, Septhemba 15 ukuze ulifunde.
UFrancesca Haig yethula i-trilogy ethokozisayo lapho kungekho khona ukuntuleka kothando, umona nokuphikisana ngamandla, okushicilelwe nguMinotauro.
Amazwibela »ENtshumayelo Yomlilo»
Eminyakeni engamakhulu amane ngemuva kwe-apocalypse yenuzi, abantu bahlala emhlabeni ongenabo ubuchwepheshe lapho izingane ezisanda kuzalwa zihlala zingamawele: omunye wabo uphelele ngokomzimba, i-alpha; omunye uhlushwa uhlobo oluthile lokukhubazeka, i-omega. Lo mhlaba ungowama-alphas kanti ama-omegas ahlala ekhishwa inyumbazana ezindaweni ezihlala zodwa. Kodwa-ke, lapho elinye iwele lifa, nalo elinye liyafa.
Ngokwalesi sizathu, uCassandra uvalelwe ngomyalo womfowabo uZach lapho eba ngumholi ovelele woMkhandlu. Inhloso yakhe ukuqinisekisa ukuphepha kwakhe ngenkathi ehlela umhlaba lapho i-omegas ingenakusetshenziswa ukulwa namawele akhe. Kepha uCass uhlobo olukhethekile lwe-omega: akanakho okungajwayelekile emzimbeni, uyimboni.
Funda izahluko zokuqala ze- Intshumayelo yomlilo lapha
Mayelana noFrancesca Haig
UFrancesca Haig ungumfundisi waseyunivesithi ozinze eLondon. Ushicilele imisebenzi eminingana yezinkondlo neprose kumamagazini ezincwadi kanye nama-anthologies eNgilandi nase-Australia, futhi usezuze imiklomelo eminingana.
UngakwaziThenga Intshumayelo yomlilo lapha
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » eziningana » ISaga "Intshumayelo Yomlilo", ebhalwe nguFrancesca Haig, lehlela ngoSepthemba 15